China Multifunctional Umanyolo Truck ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
I-DFC yochungechunge lomanyolo wokusabalalisa isetshenziselwa ukusabalalisa umanyolo wesisekelo ngaphambi kokulima, ukuhlwanyela ngemuva kokulima kanye notshani. Ukusebenza kokusabalalisa umanyolo wembewu kwenziwa. Umshini unezici zesakhiwo esihlangene, ukusetshenziswa okuhlukahlukene, ukusebenza kahle kakhulu nokuhlwanyela, okulungele ukusetshenziswa kwamapulazi amakhulu, amadlelo kanye namadlelo.
Inkampani yethu iqala futhi idizayine lolu hlobo lwesisabalalisi somquba ukuhlangabezana nokufunwa okubanzi kwabasebenzisi bezingcwecwe zomquba ezimanzi (umquba wezinkukhu ezimanzi, umquba wezinkomo, umquba wengulube, njll.) Ngogandaganda abancane nabaphakathi. Isisabalalisi somquba siqhutshwa ngogandaganda futhi sisebenzisa ukwakheka kwe-screw auger ukusabalalisa zonke izinhlobo zomquba. Umphumela wokuphonsa umfaniswano futhi unokwethenjelwa, futhi wonke umshini unesakhiwo esihlanganisiwe futhi esiguquguqukayo nokusetshenziswa okubanzi.
Umshini wonke ubunjwe ngohlaka lokudonsa, ifreyimu, ibhokisi lomanyolo, ithangi likawoyela wokubacindezela, uhlelo lwe-hydraulic, idivaysi yokudlulisela, idivaysi yokuphakela umanyolo, idivaysi yokusabalalisa umanyolo, indlela yamasondo omhlaba, njll. Umshini usebenzisa ukukhishwa kwamandla kagandaganda emuva njengamandla ukushayela uhlelo lwe-hydraulic lwe-fuselage ukushayela imoto ye-hydraulic ukusebenza. Umanyolo uhanjiswa uhlehliswe emuva ngedivayisi yokuphakela umanyolo, futhi ibhokisi lamagiya liqhutshwa yisithungo sokudlulisa sangemuva ukubona ukuhlwanyelwa kukamanyolo.
3700 * 1600 * 1700
4200 * 1800 * 1750
4800 * 2000 * 1700
4800 * 2200 * 2050
5500 * 2200 * 2250
5560 * 2000 * 2320
13.6-28 / 2
10.00-20 / 2
6 spline / 8 spline
Ijubane Phendla Ukuzungelezisa
Iphoyinti eli-3 elijwayelekile
Izici Zokusabalala Komquba
1. Ifakwe ogandaganda abancane nabangathathi hlangothi, okugcwalisa okungenalutho koTrektara abancane nabaphakathi Abahlonyelwe umquba wokusabalalisa.
2. Isakhiwo sokuhambisa umanyolo nokuphonswa kukamanyolo kuqhutshwa yimishini, futhi sidinga kuphela ukuxhunywa nge-shaft yokudlulisa. Isakhiwo silula, kulula ukusisebenzisa futhi kulula ukusigcina.
3. Ingasabalalisa zonke izinhlobo zomquba wasepulazini owomile futhi omanzi (umquba wenkukhu, umquba wenkomo, umquba wengulube, umquba wezimvu), umquba ozinzile, umquba, njll.
4. Isakhiwo sokuphonsa i-auger sisebenza ngejubane elikhulu, umphumela wokuphonsa umanyolo ufana, ukusebenza kahle kuphezulu, futhi izindleko zokuphonsa umanyolo mathupha zilondolozwe kakhulu
5. Inani likamanyolo lingalungiswa ngokuya ngokufunwa ngumsebenzisi.
Langaphambilini I-Spring Tine Ripper YeTractor 3 Point Ripper Farm Farmivator
Olandelayo: Ukusabalalisa Umanyolo Wezolimo
Ukusabalalisa Umanyolo Wezolimo